မိစ္ဆာစစ်ဘီလူးတို့ဇာတ်သိမ်းခန်းနီးလာပြီ (လွပ်လပ်စွာ ကူးယူဖော်ပြနိင်ပါတယ်။ Credit ပေးဖို့မလိုပါ။) - Update News
May 26, 2021 May 26, 2021 - by Best_admin
တိုင်းပြည်ကိုရေရှည်စစ်ပွဲတခုဆီ ဆွဲခေါပြီး သူတို့အားသာတဲ့စစ်အင်အားနဲ့အနိုင်ကျင့်နှိပ်ကွပ်ဖို့ ကြံရွယ်ထားပုံရတဲ့စစ်ကောင်စီဟာ တကယ့်လက်တွေ့မှာ တိုက်ရည်ခိုက်ရည်ကင်းမဲ့ပြီး စည်းကမ်းပျက်အကျင့်ပျက်လှတဲ့ သူ့ဓားပြတပ်အပေါ် အတော့်ကိုစိုးရိမ်စိတ်ပူပုံရနေတာ သိသာလှပါတယ်။ KNU – KIA နှစ်ဖွဲ့တည်းနဲ့ တိုက်နေရပေမယ့် မြေပြင်မှာဆက်တိုက်အကျအဆုံးများနေပြီး သာလွန်အင်အားနဲ့ ပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိင်တာမျိုးတောင် မလုပ်နိင်သေးပါဘူး။
လေကြောင်းပစ်ကူတွေနင်းကန်သုံးပြီး တိုက်ပြနေတာက ရုရှားကဝယ်ထားတဲ့ လေယာဉ်တွေရဲ့ထိရောက်အသုံးဝင်မှုကို စမ်းနေတာလည်းဖြစ်နိင်သလို မြေပြင်ကနေ ကောင်းကောင်းထောက်ပံ့မပေးနိင်တော့လို့လည်း ဖြစ်နိင်ပါတယ်။ တချိန်ထဲမှာ ကြိုးဝိုင်းထဲဝင်လာမယ့် တခြားအဖွဲ့တွေကိုပါ ခြိမ်းခြောက်ပြတဲ့သဘောလို့လည်း မြင်မိပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မြေပြင်မှာထိခိုက်ကျဆုံးမှုတွေများပြားနေတာ နောက်ထပ်လွှတ်မယ့်တပ်တွေအပေါ်မှာပါ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေရှိနေပြီး (မသွားချင်လို့လာဘ်ပေးမှုတွေ၊ မျက်နှာလိုက်မှုတွေတွဲပြီး ပါလာနိင်တာသေချာပါတယ်)
အဲဒါနဲ့တဆက်တည်းမှာ တပ်ပြေးတွေ၊ CDM တွေပိုမိုများပြားလာနိင်ပါတယ်။ ဒီ့အတွက်တပ်ချုပ်နဲ့ဒုတပ်ချုပ် ကိုယ်တိုင်လှည့်လည်ပြီး တပ်တွင်းစည်းရုံးရေးပြန်ဆင်းနေရတာသာဓကပါပဲ။ တချိန်တည်းမှာ မြို့ပေါ်မှာအနိင်ကျင့်ဗိုလ်ကျ လုယက်စားသောက်နေတဲ့တပ်တွေလည်း ဟိုနေရာသည်နေရာက ဗုံးသံတွေကြောင့် ကျီးလန့်စာစားဘဝရောက်ရှိလာပါပြီ။
မကြာခင်မှာ ပြည်သူတွေခံစားရသလို လမ်းမထွက်ရဲအိမ်မှာတောင် ကောင်းကောင်းမနေရဲတဲ့ဘဝမျိုး မုချကြုံရပါတော့မယ်။ တပ်ဟာဘယ်တုန်းကမှ စည်းလုံးမှုမပြိုကွဲဘူးဆိုတာ ဘယ်တုန်းကမှဖိအားပေးမခံခဲ့ရလို့ပါ။ ကိုယ်အကျိုးစီးပွားကလွဲပြီး ဘာခံယူချက်ဘာအယူအဆမှမရှိတဲ့ ဒီအောက်တန်းကျယုတ်မာတဲ့မသမာသူ ဒီစစ်အုပ်စုဟာ သူတို့အချင်းချင်းဘယ်လောက်သစ္စာရှိနိင်မလဲ ? ဘယ်လောက်ကြာစုနေနိုင်မလဲ ? မကြာခင်မှာစမ်းသပ်ခံရတော့မှာပါ။
ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲရက်စက်ယုတ်မာ အောက်တန်းကျဉာဏ်ပညာနိမ့်ကျ စာရိတ္တသိမ်ဖျင်းလှတဲ့ ဒီမသမာသူတစုဟာ မကြာခင်ကာလမှ အပြီးတိုင်ချုပ်ငြိမ်းရမှာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပါ။ ပြည်သူတွေနိုင်ကိုနိုင်ရမယ်။ တရားသောစစ်ကို ဆင်နွှဲတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး တိုင်းရင်းသားပြည်သူ့ တပ်များအားလုံး နှင့် အကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ KNU – KIA ဦးဆောင်တဲ့ တိုင်းရင်းသားစစ်သည်တော်အားလုံး ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲတန်ဖိုးမဲ့တဲ့ လူယုတ်မာစစ်အာဏာရူးရဲ့ ဘေးမှကင်းဝေးကြပြီး အောင်ပန်းကိုအမြန်ဆုံး ဆွတ်ခူးနိုင်တော့မယ်လို့ လေးမြတ်စွာယုံကြည်ပါတယ်။
ပြည်သူသာအဓိကပါ ပြည်သူ့အားက ပြညိသူ့ထံမှာရှိသလို တိုင်းပြည်အချုပ်အခြာအာဏာဟာ ပြညိသူ့ထံမှသာအမှန်တကယ်သက်ဆင်းရပါတယ်။
(လွပ်လပ်စွာကူးယူဖော်ပြနိင်ပါတယ်။ Credit ပေးဖို့မလိုပါ။)
တိုင္းျပည္ကိုေရရွည္စစ္ပြဲတခုဆီ ဆြဲေခါၿပီး သူတို႔အားသာတဲ့စစ္အင္အားနဲ႔အႏိုင္က်င့္ႏွိပ္ကြပ္ဖို႔ ႀကံ႐ြယ္ထားပုံရတဲ့စစ္ေကာင္စီဟာ တကယ့္လက္ေတြ႕မွာ တိုက္ရည္ခိုက္ရည္ကင္းမဲ့ၿပီး စည္းကမ္းပ်က္အက်င့္ပ်က္လွတဲ့ သူ႔ဓားျပတပ္အေပၚ အေတာ့္ကိုစိုးရိမ္စိတ္ပူပုံရေနတာ သိသာလွပါတယ္။ KNU – KIA ႏွစ္ဖြဲ႕တည္းနဲ႔ တိုက္ေနရေပမယ့္ ေျမျပင္မွာဆက္တိုက္အက်အဆုံးမ်ားေနၿပီး သာလြန္အင္အားနဲ႔ ျပန္လည္တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္နိင္တာမ်ိဳးေတာင္ မလုပ္နိင္ေသးပါဘူး။
ေလေၾကာင္းပစ္ကူေတြနင္းကန္သုံးၿပီး တိုက္ျပေနတာက ႐ုရွားကဝယ္ထားတဲ့ ေလယာဥ္ေတြရဲ႕ထိေရာက္အသုံးဝင္မႈကို စမ္းေနတာလည္းျဖစ္နိင္သလို ေျမျပင္ကေန ေကာင္းေကာင္းေထာက္ပံ့မေပးနိင္ေတာ့လို႔လည္း ျဖစ္နိင္ပါတယ္။ တခ်ိန္ထဲမွာ ႀကိဳးဝိုင္းထဲဝင္လာမယ့္ တျခားအဖြဲ႕ေတြကိုပါ ၿခိမ္းေျခာက္ျပတဲ့သေဘာလို႔လည္း ျမင္မိပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ေျမျပင္မွာထိခိုက္က်ဆုံးမႈေတြမ်ားျပားေနတာ ေနာက္ထပ္လႊတ္မယ့္တပ္ေတြအေပၚမွာပါ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာထိခိုက္မႈေတြရွိေနၿပီး (မသြားခ်င္လို႔လာဘ္ေပးမႈေတြ၊ မ်က္ႏွာလိုက္မႈေတြတြဲၿပီး ပါလာနိင္တာေသခ်ာပါတယ္)
အဲဒါနဲ႔တဆက္တည္းမွာ တပ္ေျပးေတြ၊ CDM ေတြပိုမိုမ်ားျပားလာနိင္ပါတယ္။ ဒီ့အတြက္တပ္ခ်ဳပ္နဲ႔ဒုတပ္ခ်ဳပ္ ကိုယ္တိုင္လွည့္လည္ၿပီး တပ္တြင္းစည္း႐ုံးေရးျပန္ဆင္းေနရတာသာဓကပါပဲ။ တခ်ိန္တည္းမွာ ၿမိဳ႕ေပၚမွာအနိင္က်င့္ဗိုလ္က် လုယက္စားေသာက္ေနတဲ့တပ္ေတြလည္း ဟိုေနရာသည္ေနရာက ဗုံးသံေတြေၾကာင့္ က်ီးလန႔္စာစားဘဝေရာက္ရွိလာပါၿပီ။
မၾကာခင္မွာ ျပည္သူေတြခံစားရသလို လမ္းမထြက္ရဲအိမ္မွာေတာင္ ေကာင္းေကာင္းမေနရဲတဲ့ဘဝမ်ိဳး မုခ်ႀကဳံရပါေတာ့မယ္။ တပ္ဟာဘယ္တုန္းကမွ စည္းလုံးမႈမၿပိဳကြဲဘူးဆိုတာ ဘယ္တုန္းကမွဖိအားေပးမခံခဲ့ရလို႔ပါ။ ကိုယ္အက်ိဳးစီးပြားကလြဲၿပီး ဘာခံယူခ်က္ဘာအယူအဆမွမရွိတဲ့ ဒီေအာက္တန္းက်ယုတ္မာတဲ့မသမာသူ ဒီစစ္အုပ္စုဟာ သူတို႔အခ်င္းခ်င္းဘယ္ေလာက္သစၥာရွိနိင္မလဲ ? ဘယ္ေလာက္ၾကာစုေနႏိုင္မလဲ ? မၾကာခင္မွာစမ္းသပ္ခံရေတာ့မွာပါ။
ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲရက္စက္ယုတ္မာ ေအာက္တန္းက်ဉာဏ္ပညာနိမ့္က် စာရိတၱသိမ္ဖ်င္းလွတဲ့ ဒီမသမာသူတစုဟာ မၾကာခင္ကာလမွ အၿပီးတိုင္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရမွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲပါ။ ျပည္သူေတြႏိုင္ကိုႏိုင္ရမယ္။ တရားေသာစစ္ကို ဆင္ႏႊဲတိုက္ပြဲဝင္ေနၾကတဲ့ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရး တိုင္းရင္းသားျပည္သူ႔ တပ္မ်ားအားလုံး ႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးေနတဲ့ KNU – KIA ဦးေဆာင္တဲ့ တိုင္းရင္းသားစစ္သည္ေတာ္အားလုံး ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲတန္ဖိုးမဲ့တဲ့ လူယုတ္မာစစ္အာဏာ႐ူးရဲ႕ ေဘးမွကင္းေဝးၾကၿပီး ေအာင္ပန္းကိုအျမန္ဆုံး ဆြတ္ခူးႏိုင္ေတာ့မယ္လို႔ ေလးျမတ္စြာယုံၾကည္ပါတယ္။
ျပည္သူသာအဓိကပါ ျပည္သူ႔အားက ျပညိသူ႔ထံမွာရွိသလို တိုင္းျပည္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဟာ ျပညိသူ႔ထံမွသာအမွန္တကယ္သက္ဆင္းရပါတယ္။
(လြပ္လပ္စြာကူးယူေဖာ္ျပနိင္ပါတယ္။ Credit ေပးဖို႔မလိုပါ။)
Previous Article မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်လာရင် ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားသင့်တယ် ဘယ်လိုတွေကြုံလာနိုင်တယ် ဘယ်လိုအဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်ဖို့
Next Article တိုင်းပြည်က စားရ မဲ့ သောက်ရ မဲ့ အနာဂါတ်မဲ့နေချိန် စစ်တပ်က ပိုင်သမျှကို ကြည့်လိုက်
ကိုကြီး တောင် ကြည့်မယ်နော်
စစ်ကောင်စီဘက်မှ ပျူစောထီးအဖွဲ့သား တစ်ဦးရဲ့ ဖွင့်ဟဝန်ခံချက်